iTunes ka akporo ekwentị
Nyefee music si iTunes ka Android ekwentị
The software nke TunesGo ugbu na PC gị na kwesịrị ka a meghere site abụọ na ịpị nke ya akara ngosi. A n'ụlọ ihuenyo dị ka n'okpuru ga-apụta
Ugbu a jikọọ gị Android ekwentị gị PC. N'otu nsọtụ USB bụ ike jikọọ USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke PC na ndị ọzọ na njedebe nke Android ngwaọrụ. Ngwaọrụ ga-apụta n'okpuru "Ngwaọrụ" nhọrọ na n'aka ekpe menu nke TunesGo n'ụlọ peeji. (Nseta ihuenyo egosi SamsungGT-I9300 dị ka ejikọrọ ngwaọrụ)
Pịa na Music nhọrọ ugbu n'okpuru iTunes n'ọbá akwụkwọ na n'aka ekpe menu nke ga-ndepụta nke songs ugbu a.
Họrọ songs na ị chọrọ ga-agafere nwaa ngwaọrụ (nseta ihuenyo egosi 2 họrọ songs)
On top kasị menu, pịa "Export Iji" ọrụ nke ga-listi ngwaọrụ
Site ndepụta, họrọ ngwaọrụ nke ị chọrọ agafeta music. (Họrọ ngwaọrụ ke ihuenyo ogbugba bụ SamsungGT-I9300)
Nzọụkwụ 7. Export ka Android
The họrọ songs ga-apụta n'okpuru Music nhọrọ nke ezubere iche ngwaọrụ (ihuenyo ga-egosi họrọ songs na Music ndepụta n'okpuru SamsungGT-I9300)
Ọzọ: iTunes ka PC / Mac